यी मन्दिरहरु जहाँ ‘फ्री’मा खाना खुवाइन्छ
एजेन्सी । मन्दिर एक पवित्र स्थल हो, जहाँ भक्तजनहरु आफ्ना मनोकामना लाई लिएर विश्वास गर्दै मन्दिरमा दर्शन गर्न पुग्ने गर्छन् । भारतको मन्दिरमा जब निःशुल्क भोजन प्रदान गर्ने प्रसङ्ग आउँछ तब पहिलो स्थानमा ‘अमृतसर द गोल्डन टेम्पलको नाम आउँछ । जसले विश्वमै सबैभन्दा बढि निःशुल्क खाना प्रदान गर्छ । यसका साथै भारतमा अन्य थुप्रै मन्दिरहरु रहेका छन्, जसमा मुफ्त मा खाना खुवाइन्छ । जसमा दैनिक आधारमा हजारौं मानिसलाई फ्रि मा खाना खुवाउने गर्छन् । हेरौं मुख्य ९ मन्दिरहरु जसले फ्रि मा खाना खुवाउँछन् ।
२०९ रुपैयाको चिट्ठाले ४९ करोड जितेपछि...
एजेन्सी । दुई सन्तानकी आमा विक्की मिचेलले आफूलाई एकदमै भाग्यशाली प्रमाण गरेकी छिन् । जसअनुसार उनले अप्रत्याशित रुपमा चिट्ठा जितेकी हुन् ।
मंगलबारदिन नङ पनि काट्नु हुँदैन, त्यस्तै अरू के के कार्यहरु गर्नुहुँदैन ?
कस्तो हुन्छ कलियुगको समाप्ति भन्दा अगाडिको अवस्था ?
‘एस’ लेटरबाट नाम सुरु गरेका व्यक्तिहरुको मन एकदमै सफा हुन्छ
एजेन्सी । अंग्रेजीको १९ औ लेटर ‘एस’ । किताबी ज्ञान बाहेक व्यवहारिक ज्ञानमा पनि ‘एस’ लेटरको महत्व रहेको बताइन्छ ।
अब ‘सेन्सर’ ले बताउनेछ, खाना ताजा या बासी !
एजेन्सी । खाना बासी हो या होइन, यसको लागि अब तपाइलाई सुँघीराख्नु पर्दैन । अब यो कामको लागि एक सेन्सर प्रयोगमा आउने भएको छ । जुन तपाइको स्मार्टफोनसँग सम्बन्धित हुनेछ ।
१८ वर्षीया छोरीले आफ्नो कुमारीत्व २६ करोडमा बेचेपछि...
एजेन्सी । रोमानियाकी एक १८ वर्षीया युवतीले आफ्नो कुमारीत्व करिब २६ करोड रुपैयाँ ९२० लाख पाउन्ड स्ट्रलिङमा बेचेको बताएपछि उनको बाबु–आमाले घर फर्कन प्रतिबन्ध लगाएका छन् । बाबुआमाले त्यस्तो नगर्न दिएको धम्कीको बाबजुद् एलेएक्जान्ड्रा खेफेरेन नाम गरेकी ती युवतीले हङकङका एक व्यापारीलाई आफ्नो कुमारीत्व बेचेकी हुन् ।